Intel Dayz Hack ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Intel DayZ mbanye anataghị ikike
Ihe ọ bụla ga-ekwe omume mgbe ị nwetara DayZ Intel Hack anyị ịdabere na ya!
Were ngwá ọrụ maka ule nyocha ma ị ga-ahụ n'anya. Zụta igodo ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Ma etinyeghị aka, ma ọ dịbeghị njikere ịhapụ ohere ugbu a? Zụta onwe gị igodo ngwaahịa dị izu 1 taa!
Naanị ndị otu raara onwe ha nye nke Gamepron ga-achọ nke a. Keyzụta igodo ngwaahịa ọnwa 1 taa!
Ma ọ bụ ebumnuche gị ma ọ bụ ọnọdụ ndị iro, ị nwere ike iji DayZ Intel Hack nweta uru na ọnọdụ ọ bụla. Ọ dị mma ịmụtakwu gbasara gburugburu gị, ebe ọ ga - enyere gị aka imeri.
DayZ Intel Hack Ozi
DayZ ga-atụba gị n'etiti apocalypse zombie, ọ dịkwa onye ọkpụkpọ ahụ ịchọpụta ihe ị ga-eme. Somefọdụ ndị mmadụ ga - esoro ndị ọzọ rụkọta ọrụ wee wuo ntọala, ebe ụfọdụ ga - anọ naanị ha, ihe ị ga - echeta bụ na onye ọ bụla nwere otu ebum n’uche, ebum n’uche ahụ bụ ịlanarị! Iji anyị DayZ Intel mbanye anataghị ikike ga-bụghị naanị-ekwe ka ị na-adị ndụ n'ihi na ogologo, ma ị pụrụ ọbụna ịnọgide na-enwe ihe ike ike play style na ka nwere ihe ịga nke ọma. Ndị mmadụ na-akpachara anya mgbe ha na-egwu egwu DayZ, mana echekwaghị echiche!
DayZ Intel anyị nwere ihe ịtụnanya nwere Aimbot, ESP / Wallhack, yana atụmatụ ndị ọzọ ga - enyere gị aka ịnyagharịa oge ọhụụ dị mfe. You'll ga-ahụkwa atụmatụ dị ka kompas, mwepụ, ihu igwe Mods, DLC Unlockers, na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ ga-eme ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ (ma dịkwa mfe iji merie!).
Ozi Iro (zombies, anụmanụ, obodo)
Ọnwụ igbu ọchụ
Ihu igwe zuru oke
Onye mmadu 3 lere
Banyere DayZ Intel
DayZ Intel zuru oke maka onye ọ bụla na-eji CPU nke Intel, ọkachasị mgbe ị tụlere naanị "Ọnwụ igbu ọchụ". Adịghị egbefighter bụ abụghị nhọrọ a DayZ mbanye anataghị ikike nyeere, na ọ bụ ya mere na ọ ghọọ anyị # 1 nhọrọ! Nwere ike ịgbanwe ntọala DayZ aimbot ruo n'ókè ebe ọ ga-agbapụ zombies kpamkpam, na-elekwasị anya naanị na ndị egwuregwu mmadụ na-eyi ihe iyi egwu egwu. Dị na Bekee, ngwaahịa a ga-abịa yana HWID Spoofer gụnyere. Ndị gị bụbu ngwaike NJ machibidoro n'oge gara aga nwere ike ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ! Nwetụla mgbazinye na ndụ gị DayZ.
Gini mere iji jiri DayZ Intel karia ndi ozo?
Gamepron bụ onye kachasị enye onyinye DayZ hacks n'ịntanetị, ị nwere ike ịjụ onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ anyị gbasara nkwupụta ahụ. Imirikiti ndị na-azụta hacks emeela nwa oge, yana site n'ọtụtụ ebe dị iche iche, nke na-eduga na ha na-enwe mmechuihu ọtụtụ oge. N'ihe banyere nyocha, ndị ahịa anyị niile enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe dị mma ikwu banyere ọrụ na ngwaọrụ anyị, yabụ gịnị kpatara ị ga-eji na-achọgharị ebe ọzọ? Hackzụta ihe mbanye anataghị ikike DayZ nke ga-enyere gị aka ime nke ọma, ma ọ bụghị na-arụ ọrụ obere oge tupu amachibido gị iwu. Enwere ihe kpatara anyị ji bụrụ # 1 na ntanetị!
Gbanwee ntọala DayZ mbanye anataghị ikike iji kwado mkpa gị n'ụzọ zuru oke site na iji DayZ Intel cheat. Kedu ihe kpatara ị ga - eji dozie ntọala ụlọ ọrụ nke ngwa ọrụ ọ bụla? Gamepron na-etinye ike n'ọbụ aka gị site na ịhapụ gị ikpebi atụmatụ ndị arụ ọrụ, yana otu ha ga esi arụ ọrụ. Gbanwee nha nke FOV Circle gị n'ime DayZ aimbot, ma ọ bụ jikwaa agba nke ntọala ESP gị - nhọrọ nhọrọ aha gị dị ka enweghị njedebe mgbe ị na-eji DayZ Intel aghọ aghụghọ ule. Echefu banyere ịgbalị ịzụlite egwuregwu ịgba egwu gị ụzọ ọdịnala wee soro mmemme ahụ!
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ novice mgbe ọ na-abịa hacks ị nwere ike irite uru na ngwaọrụ anyị. Ha niile dị mfe ma kwụ ọtọ, na-enye ọbụlagodi “green” hacker ọgụ ohere na ịntanetị! Anyị bụ ndị na-eweta 1 XNUMX nke DayZ Hacks maka ihe kpatara ya.
Njikere iji merie ọzọ? Zụta igodo ngwaahịa gị taa!
Njikere Na-achị na anyị DayZ Intel mbanye anataghị ikike?